Voaroy miaraka amin'ny zavokà | Bezzia
Maninona no ampifandraisina ny sakafo matsiro hanina ve? Ny felam-boaloboka masaka miaraka amin'ny zavokà izay omaninay anio dia voaomana ao anatin'ny 10 minitra fotsiny; haingana, eny, nefa mahasalama ihany koa. Mety amin'ny rehefa mody reraka ianao ary tsy te hiditra an-dakozia.
Salady maintso misy voaloham-bokom-boaloboka ao ambadika, zavokà ary ravina saosy voanio sy dipoavatra. Toa tsy ratsy, sa tsy izany? Tany Bezzia no nampiasainay ny vodin-tsiranoka voadio satria io no teo am-pelatananay nefa mety tsara koa amin'ny valahana vaovao. Sahy manomana azy ve ianao?
Voaloboka maina eran-tanana
Steak sirônina 4 namboarina tamin'ny tsipika
1/2 dipoavatra mena
Dipoavatra 1 sotrokely
Sasao ny salady ary apetraho ao ambadiky ny takelaka roa izany. Manampia voaloboka maina.
Sokafy avokado roa, taolana izy ireo ary apetraho amin'ny sombin-javatra tsirairay avy ny tsirairay amin'izy ireo.
Ao anaty lapoaly, manafana menaka iray sotro sy asio saosy ilay tenderloin mandra-volontany volamena.
Ampio ny felam-boninkazo sy ny vanim-potoana.
Sasao minitra vitsivitsy hafa ary avy eo araraka ny vinaingitra balsama. Afangaroy, endasina mandritra ny segondra roa ary ampidiro ao anaty salady.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fomba fanamboarana » Carnes » Voaroy miaraka amin'ny zavokà
Ny fijery tsara indrindra amin'ny fampakaram-badin'ny mpanjaka eo amin'i Meghan Markle sy Prince Harry